Juventus Iyo Ac Milan Oo Guulo Gaaray, Iyo Kulamada Kale Ee La Ciyaaray Horyaalka Taliyaaniga
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Juventus iyo Ac Milan oo guulo gaaray, iyo Kulamada kale ee la...
Kooxda Juventus ayaa mar kale sii wada guulaheeda horyaalka Taliyaaniga iyagoo soo yareeyay farqiga kala dhaxeeya labada kooxood ee ku tartamaya hogaanka horyaalka.
Juventus ayaana gurigeeda ku dubatay kooxda Sampdoria iyagoo ku badiyay labo gool oo ay ka kala heshay Federico Chiesa daqiiqadii 9-aad iyo Aaron Ramsey daqiiqadii 90+1-aad guud ahaan ciyaarta ayaana ku soo dhamatay 0-2.
Guusha Juventus ayaana ka dhigan in ay hal dhibic ka danbeyso kooxda Inter milan oo kaalinta labaad ku jirta kuwaasi oo leh 41 dhibcood halka ay 6 dhibcood ka danbeyso Ac milan.
Kooxda Juventus ayaa la ciyaaridoonta kooxda Inter milan kulankeeda xiga kulankaasi oo qeyb ka ah koobka Cope Italia Semefinalkiisa.
Kooxda Ac Milan ayaa dheereesatay hogaanka Horyaalka Serie A kadib markii ay garaaceen kooxda Bologna oo gurigeeda lagu ciyaarayay.
inkastoo Zlatan Ibrahimovic laga qabtay gool rigoore ah hadana Milan ayaa labada gool ee guusha ka heshay Ante Rebic Daqiiqadii 26-aad iyo Franck Kessie gool rigoore ah daqiiqadii 55-aad Bologna ayaana heshay hal gool oo uu u dhaliyay Andrea Pol guud ahaan ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay 1-2.
Natiijada kulankan ayaa ka dhigan in Ac Milan ay hogaanka ku qabato 5 dhibcood oo nafiid ah iyagoo leh 46 dhibcood.
Ac Milan ayaa la ciyaaridoonta kooxda Crotone kulankeeda xiga ee Horyaalka Serie A.
Kadib Kulamada la ciyaaray Natiijada kala horeynta ayaa ah sidan
2 Inter 20 13 5 2 46 23 23 44
3 Juventus 19 11 6 2 39 18 21 39
4 Roma 19 11 4 4 41 32 9 37
5 Atalanta 19 10 6 3 44 23 21 36
6 SSC Napoli 18 11 1 6 41 19 22 34
7 Lazio 19 10 4 5 32 26 6 34
8 Hellas Verona 19 8 6 5 25 18 7 30
9 Sassuolo 19 8 6 5 32 29 3 30
12 Benevento 20 6 4 10 23 37 -14 22
13 Bologna 20 5 5 10 25 35 -10 20
19 Parma Calcio 1913 19 2 7 10 14 36 -22 13
Previous articleManchester United iyo Arsenal oo bar-baro ku kala baxay, Manchester City oo hogaanka dheereesatay
Next articleFalanqeynta Kulanka Chelsea Vs Burnley ee Horyaalka Premier League